Akụkọ - Gini ka ikwesiri ilebara anya mgbe i na azuta akwa umuaka?
Kedu ihe ị kwesịrị ị paya ntị na mgbe ịzụrụ akwa mmiri ụmụaka?
Anyị ndị toro eto na-ebu nche anwụ mgbe anyị na-eme njem. Nche anwụ nwere ike ọ bụghị naanị ndo, kamakwa gbochie mmiri ozuzo. Mfe ibu bụ otu n'ime ihe ndị dị mkpa maka njem anyị, mana oge ụfọdụ ọ naghị adịrị ụmụaka mfe ijide nche anwụ. O di nkpa ka umuaka yi akwa mmiri ozuzo nye umuaka. E nwere ọtụtụ ụdị mmiri ozuzo ụmụaka na ahịa. Kedu ihe anyị kwesịrị ị attentiona ntị na mgbe anyị na-azụ ụmụaka akwa mmiri ozuzo? Ndị na-esote Foshan na-emepụta mmiri ozuzo ga-agwa gị nkenke ihe dị gị mkpa mgbe ịzụrụ akwa mmiri ụmụaka!
1. Ihe eji eme uko mmiri ụmụaka
N'ikwu okwu n'ozuzu, ejiri akwa PVC mee akwa mmiri ụmụaka, ma jiri akwa PVC mee akwa mmiri. N'agbanyeghị ụdị ihe ọ bụ, ọ dị anyị mkpa ịnọgide na-enwe ya mgbe ịzụrụ, ka mmiri ozuzo wee nwee ike ịdịte aka.
2. rainmụaka oke mmiri ozuzo
Mgbe ịzụrụ akwa mmiri ụmụaka, anyị kwesịrị ị attentiona ntị na oke. Fọdụ ndị nne na nna nwere ike iche na akwa mmiri ụmụaka ga-ebu ibu ka ha nwee ike iyi ha ogologo oge. N’ezie, akwa mmiri ozuzo ụmụaka nke buru oke ibu adịghị mma, ọ ga-emekwa ka ụmụaka gaa ije. N’enweghị nsogbu ọ bụla, ọ kacha mma ka ụmụaka gbalịa uwe elu mmiri mgbe ha na-azụ akwa mmiri ozuzo ka ha nwee ike zụta akwa mkpuchi mmiri kacha dabara.
3. Ọ nwere ihe ọ bụla peculiar isi
Na-esi isi ma ọ bụrụ na ị nwere isi pụrụ iche mgbe ị na-azụ akwa mmiri ụmụaka. Businessesfọdụ ụlọ ọrụ achụmnta ego na-abaghị uru ga-eji ihe ndị na-erughị eru mee akwa mmiri ozuzo ụmụaka. Uwe mmiri ozuzo ụmụaka dị otú a ga-enwe isi anụ. , Azụla ma ọ bụrụ na enwere isi ọhụụ.
Anọ, azu paaki akwa okwute
Mgbe ị na-azụ akwa ụmụaka, akwa mmiri nwere oghere maka akpa akwụkwọ fọdụrụ na azụ. Generallymụaka na-ebukarị akpa akpa. Yabụ, mgbe ịzụrụ akwa ụmụaka, ị kwesịrị ịzụta akwa mmiri ozuzo nwere ohere buru ibu na azụ.
Ise, akwa mmiri ozuzo ụmụaka nwere agba
Mgbe ị na-azụta akwa mmiri ozuzo maka ụmụaka, gbaa mbọ zụta akwa mmiri ozuzo na agba ndị na-enwu gbaa, ka ndị ọkwọ ụgbọala na ndị enyi nọ n’ebe dị anya wee hụ ha ma zere ihe ọghọm okporo ụzọ.